Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l0612 lat
Fanantenana ny fandresena
Alatsinainy 05 Nov.
Tsy vitan’ny hoe efa voaomana fotsiny ihany ny mety handresen’ny Kristianina ireo herin’ny ratsy, fa ny Baiboly mihitsy no manome mazava tsara antsika ny fanantenana ny fandresena azy ireo.
Diniho tsara ny Rôm. 8:26-39. Inona no tena tian’i Paoly hambara eto? Inona avy ireo antony omen’i Paoly ny Kristianina mba tsy hananan’izy ireo tahotra ny amin’ny hoavy? Jereo ireo teny fikasana mahafinaritra sy teny fampaherezana rehetra hita ao amin’ireo andininy ireo. Averina indray, ahoana no tsy tokony handraisantsika izany ho teôlôjia fotsiny na koa zavatra mahafinarinaritra ny sofina fotsiny, fa mba hiainantsika mihitsy araka ny fampianarana mazava omen’ny Tenin’Andriamanitra aseho eto?
Efa hatramin’izay no niteraka adihevitra be mikasika “ny fandaharana mialoha izay ho anjaran’ny olona” ny Rôm. 8:29, 30. Eo amin’ny tontolon-kevitry ny teny fikasana anankiray lehibe anefa no tena isehoan’io andininy io. Fara fahakeliny antony anankiroa mafy orina tsara no omen’i Paoly ny Kristianina mba hitokian’izy ireo amin’ny Tompo. Voalohany, ny Fanahy dia manampy antsika ao anatin’ireo fitsapana manjo antsika sy ny “fimonomononantsika”. Faharoa, araka ny zava-kendren’Andriamanitra maharitra mandrakizay, ny zavatra rehetra, ao anatin’izany ny fizahan-toetra, dia samy miara-miasa hahasoa avokoa ho an’ny Kristianina (na mety ho sarotra aza ny mahita izany amin’izao fotoana izao). Ampahany lehibe tafiditra ao amin’izany atao hoe miaina amin’ny finoana fa tsy amin’ny fahitana izany ny fitokisana amin’Andriamanitra ao anatin’ny fotoan-tsarotra.
Voalazan’ny and. 29,30 ny fomba entin’i Paoly manamarina ny tokony hitokisana amin’Andriamanitra ao amin’ny and. 28. Asehony ao amin’ireo andininy ireo ny fizotry ny zava-kendren’Andriamanitra ho an’ireo izay tia Azy. Tafiditra ao anatin’io tanjona io ny fomba rehetra hahatanterahan’ny famonjena.
Ahoana no fomba nahatongavan’i Paoly amin’ny fara tampon’ny zavatra tiany holazaina ao amin’ny and. 31-34, mikasika io tokony hitomboan’ny toky ananan’ny Kristianina io? Jereo manokana ny and. 31. Eo amin’ny tontolon-kevitry ny fifanandrinana lehibe ifanaovan’ny tsara sy ny ratsy, inona no azontsika raisina manokana avy amin’io andininy io?
Misy zavatra maromaro voatanisa ao amin’ny Rôm. 8: 35-39, izay hahazoan’ny Kristianina fandresena. Mariho fa tafiditra ao anatin’io lisitra io koa ireo “fanapahana sy fanjakana”. Ny fitanisana nataon’i Paoly dia milaza fa tsy misy na inona na inona eo amin’izao tontolo rehetra izao ka tsy hahazoan’ny Kristianina fandresena, vokatr’izay nataon’i Jesôsy.